Sidee si loo noqdo kaalmada barnaamij aan faa'iido- | USAHello | USAHello
Sidee si loo noqdo kaalmada barnaamij aan faa'iido-
Non-profit organizations help solve problems with people, bulshooyinka, iyo in deegaanka. Magacyada kale ee urur aan faa'iido doon ah waa urur aan dawli ahayn (NGO), hay'adda iskaa wax u qabso, adeega bulshada, iyo samafal. ururada intaas oo dhammu waxay u shaqeeyaan si ay u caawiyaan dadka ama dunida ka fiican in hab qaar ka mid ah si ay u sameeyaan. Iyagu ma jiraan in ay lacag sameeyaan.
In badan oo aan faa'ido, kaaliyaha barnaamij caawiyaa agaasimaha barnaamijka abaabulo barnaamijyada. Waxay ka shaqeeyaan hawlaha kaa caawin mashaariicda si fiican u ordo ama isbedel sameeyaan.
caawiyeyaasha Barnaamijka leeyihiin laba nooc oo ugu waaweyn ee shaqada: taageero maamul iyo barnaamijka. Their responsibilities include:
Buuxinta waraaqaha ama ilaalinta macluumaadka ilaa taariikhda on computer ah
Jadwal shirarka iyo qaadashada notes
cilmi baarista barnaamijyada
Ka jawaabidda su'aalaha macmiilka
Helitaanka Jidka arrimaha barnaamijyada
Caawinta ogaado talaabooyinka xiga ururka
Non-faa'iidada jira ururo aan shaqeyn lacag. Waxay halkaas u joogaan inay caawiyaan. Inta badan ma helaan lacag midkood, sidaa darteed waa in ay helaan deeqo. A aan faa'iido laga yaabaa in hay'ad samafal ah oo yar ee degaanka ka caawinaya mid bulshada. Waxaa laga yaabaa in urur aad u weyn caalamka ee daneeya arrimaha dhibaatooyinka dunida, sida macaluusha. Waxaa laga yaabaa in aasaas oo lacag siiya si uu u taageero shaqo ee kale oo aan faa'ido.
Goobaha shaqada inta badan waa yar. caawiyeyaasha barnaamijka intooda badan ka shaqeeyaan xafiiska. Waxay inta badan ku qaataan waqti badan hore ee computer ama ka shaqeeya waraaqaha. sida caadiga ah waxay la macaamilaan macaamiisha ama dadka kula shaqeeya wax badan oo.
kaaliyaha Barnaamijka mushaaraadka kala duwan yihiin ururka. ururada waaweyn badanaa waxay bixiyaan wax ka badan. celceliska mushaharka ku wareegsan yahay $38,000. Dadka intooda badan joogaan shaqo this muddo dheer ka hor is dalacsiiyay. Celcelis ahaan waxa uu ku saabsan 10 sano.
caawiyeyaasha barnaamijka Non-profit leedahay in la sameeyo waxyaabo badan oo kala duwan. Waxaa laga yaabaa in ay u bartaan xirfado ka dib marka aad bilowdo booska.
La abaabulay - kaaliyayaasha barnaamij ay leeyihiin si ay u maareeyaan badan oo hawlaha. Ilaalinta jadwalka iyo maaraynta waqtiga aad muhiim ah.
fikirka Creative - waxaad u baahan tahay inay ka fekeraan siyaabo badan oo kala duwan si ay u xaliyaan dhibaatooyinka
Oolnimada - Taas macnaheedu waa in aad awood u dhammayn gool oo aan lacag badan ama khayraadka. Waa inaad si smart oo ay isticmaalaan waxa aad horey u
dhegeyste Good - haddii aad caawinta dadka, aad u baahan tahay in ay awoodaan in uu dhegaysan iyagii
Xirfadaha laga yaabaa in aad u baahan tahay
xirfadaha Research u helidda iyo ka warbixinta macluumaadka
xirfadaha xisaabta, waayo, qorniinkii deeq iyo miisaaniyadda
xirfadaha qoraal email kula shaqeeya, macaamiisha, iyo taageerayaasha iyo abuuro waraaqaha
xirfadaha afkaaga sidoo kale noqon doonaa mid aad u qiimo badan, haddii aad ka shaqeeya doon ahayn, halkaas oo dadka ku caawin yihiin dadka cusub.
Waa maxay tababarka, certification and experience do program assistants need?
kaaliyaha Barnaamijka waa shaqo ugu horeysay ee dad badan. Dadka intooda badan ee xilalka hoggaamineed ee sar- bilaabay sidii caawiyeyaasha.
Uma baahnid shahaado si ay u noqdaan ku xigeenka barnaamij aan faa'iido-a. Laakiin isagoo shahaadada Bachelor ee in maamulka ganacsiga, arrimaha bulshada, ama beeraha la mid ah waa waxtar leh.
Previous aragnimo essay-qoraal ama degree saxaafadda laga yaabaa in aad u caawiso shaqo ka heli a. Mararka qaarkood, caawiyeyaasha aan faa'iido doon ahayn ayaa laga yaabaa in ay qoraan codsiyada deeqda ama warqado lacag ururinta. codsiyada Grant yihiin codsiyada deeqaha. Waxay ka dhaadhiciyaan dadka in sababta oo qiimihiisu yahay ugu deeqday.
Waxaa jira hal ma shahaado gaar ah oo kaa caawin doona inaad noqoto kaaliyaha barnaamij. Waa waxtar leh in la ogaado nidaamyada computer aasaasiga ah sida Microsoft Word, Excel, iyo PowerPoint. Haddii aadan samayn, waa in aad qaadato fasal online ama laybareeriga degmadaada ama college. Waxaad had iyo jeer waxay yeelan doonaan in ay shahaadada dugsiga sare. aan faa'ido badan oo dadka ka soo jeeda dhaqamada kala duwan shaqada. Isagoo ka hadlayay luqado kale waxay noqon kartaa mid wax tar leh.
Tabaruciddu iyo layliyo shaqo jira siyaabo weyn in la soo kiraystay kaaliye barnaamij shaqo. sar- qaar waxay qabsadaan interns ay. Xitaa haddii aadan is kiraystay, aad waayo-aragnimo ku heli doonaa. Waxa kale oo aad la kulmi doontaa dadka kaa caawin kara inaad shaqo hesho mustaqbalka.
Haddii aad caawin dadka kula shaqeeya oo aad kula waajibaadkooda, waxaad ku baran doontaa xirfadaha cusub. Haddii aad u shaqayso waxay bixisaa fursad ay ku tababar in wax aad, aqbalnaa.
Daawo this video in ay bartaan sida si ay u bilaabaan xirfadaada ku sar-
Sidee si ay u bilaabaan faa'iido ah aan
Raadi shaqooyinka on Idealist.org
Raadi fursado iskaa wax u qabso ee volunteermatch.com